सैन्य शक्तिको विश्वसूचीमा अमेरिका पहिलो, कति नम्बरमा परे चीन र उत्तर कोरिया ? — Imandarmedia.com
सैन्य शक्तिको विश्वसूचीमा अमेरिका पहिलो, कति नम्बरमा परे चीन र उत्तर कोरिया ?
विश्वमा सैन्य शक्तिको हिसाबले सन् २०१७ मा पनि अमेरिका पहिलो नम्बरमा कायमै छ ।
विश्वको आधुनिक सेना र सैन्य शक्तिको विश्लेषण गर्ने शोध संस्था ग्लोबल फायर पावरले १ सय ३३ मुलुक समेटेर तयार पारेको सूचीमा अमेरिका सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य शक्ति भएको मुलुकमा पहिलो नम्बरमा कायमै रहेको हो ।
विश्लेषणमा परमाणु हतियार नभई परम्परागत् युद्धका हतियार र उपकरणलाई मात्र आधार बनाइएको छ । अमेरिकाको रक्षा बजेट ५ सय ८७ अर्ब डलर छ भने चीनको १ सय ६१ अरब डलर छ । चीनमा सक्रिय सेनाको संख्या २२ लाख र रिजर्ब सेना १४ लाख छन् ।
सैन्य शक्तिको हिसाबले अमेरिका, रुस, चीन पछिको स्थानमा भारत पुगेको छ । भारत पछि फ्रान्स र ब्रिटेन छन् । यस्तै सन् २०१७ मा सैन्य शक्ति बढाएको पाकिस्तान सूचीको १३ औं स्थानमा छ । नेपाल भने उक्त सूचिमा समावेश नै छैन । (एजेन्सी)